गजल सम्राट स्व. जगजित सिंहको गीत ‘कथा’को भिडियो आउँदै « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
गजल सम्राट स्व. जगजित सिंहको गीत ‘कथा’को भिडियो आउँदै
भारतिय संगीतको इतिहासमा पहिलो पटक डिजिटल मल्टि ट्रयाकमा गीत रेकर्ड गराएका प्रसिद्द आधुनिक तथा गजल गायक ‘गजल सम्राट’ स्व. जगजित सिंह आज पनि संगीत पारखीका ढुकढुकी हुन् । पार्थिव शरिरको अन्त्य भएपनि उनका कालजयी गीत तथा गजल कहिल्यै नमेटिने ‘अमर’ बनेका छन् ।
जगजितले २०६५ सालतिर एक नेपाली एल्बममा सोलो आवाज दिएका थिए । संगीतकार आलोक श्रीको संगीत तथा गीतकार जे.बि. संगयोगीका शब्दमा ‘संयोग’ नामक एल्बममा दशवटा गीतमा उनले स्वर दिएका थिए । नेपाली संगीतको इतिहासमा यो एल्बम नै जगजितको पहिलो र अन्तिम हो ।
७० बर्षको उमेरमा ‘ब्रेन ह्यामरेज’बाट निधन भएका जगजितको सोहि नेपाली एल्बममा समावेश दुई गीत ‘कुन माया सदर भो …’ र ‘झुल्केको घाम …’ लाई दृश्यांकन गरिसकिएको थियो । हालै मात्र अर्को गीत ‘कथा’को भिडियो छायांकन गरिएको छ । दिपेन्द्र के.सी.को निर्देशनमा तयार हुँदै गरेको उक्त भिडियोमा अच्युत पोखरेल र श्रृष्टी गिरीले अभिनय गरेका छन् । गोदावरी र बसन्तपुरमा छायांकन भएको सो भिडियोलाई रोशन श्रेष्ठले खिचेका छन् भने प्रविन श्रेष्ठले सम्पादन गरिरहेका छन् ।
स्व. जगजित सिंहले भारतको तेश्रो ठुलो सम्मान पद्म भुषण अवार्ड समेत पाएका थिए । भारतका सयौँ चलचित्र तथा उर्दु, पञ्जाबी, गुजराती लगाएतका भाषामा समेत गीत गाएका छन् ।